UJeff Goldblum Angathanda Ukwenza Enye I-Movie 'Yezindiza' - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UJeff Goldblum Angathanda Ukwenza Enye I-Movie 'Yezindiza'
UJeff Goldblum Angathanda Ukwenza Enye I-Movie 'Yezindiza'
by UMichael Carpenter June 17, 2018
by UMichael Carpenter June 17, 2018 1,835 ukubukwa
Wonke umuntu uvame ukuthanda uJeff Goldblum, futhi kungani kungenjalo, uyinganekwane. Othandekayo ngenxa yokusebenza kwakhe ngobuhlakani nokuthanda kwakhe okujwayelekile, uGoldblum unesihogo esisodwa somsebenzi, kufaka phakathi amafilimu ahlukahlukene IJurassic Park, Usuku lokuzimela, futhi Thor: Ragnarok.
Ukwesabisa abalandeli nokho, uGoldblum cishe uzohlala ekhunjulwa kakhulu ngendima yakhe yokuhola ekwenziweni okumangalisayo kukaDavid Cronenberg ngo-1986 Impukane. Ifaka eminye yemiphumela ekhethekile esebenzayo emlandweni, The Fly kufakazela ukuthi ukubuyiswa kwesinye isikhathi kungabusa.
Kuleyo filimu, uGoldblum udlala usosayensi uSeth Brundle, osungula iqoqo lezingcingo ze-teleportation ezibukeka njengeziyimpumelelo yesayensi. Ngeshwa, ugcina ngokuhlanganisa i-DNA yakhe nempukane enamandla, okuholele ekwesabeni wonke umuntu obandakanyekayo.
Nakuba fly umdali wemiphumela uChris Walas angaqondisa ukulandelana okuhle ngokwanele ngama-1989's The Indiza II, UGoldblum usanda kukwenza kwaziwe ngesikhathi enengxoxo no Igazi elizondayo ukuthi uzozimisela ngaphezu kokuvela kokusha fly isitolimende.
Ngenkathi uSeth Brundle kungenzeka ukuthi akazange asinde Impukane, UGoldblum uthi angakujabulela ukudlala isihlobo esake sashiwo ngaphambili saseBrundle. Uma ucabanga ukuthi iGoldblum inkulu kangakanani Impukane, abalandeli abangabazayo bangabuza noma yini edingekayo ukuze abuyele ku-franchise.
Noma kunjalo, kukhona okubanjiwe. Isizathu esikhulu esenza uJeff Goldblum afune ukubuya ithuba lokuthi asebenze noCronenberg futhi, futhi sekudlule iminyaka kusukela uCronenberg enza ifilimu ethusayo. Noma kunjalo, kungumqondo omnandi kakhulu ukucabanga ngawo, futhi sonke singafisa ukuthi kwenzeke.